Qarax & Dagaal ka dhacay degaano ka tirsan Gobolka Hiiraan – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaQarax & Dagaal ka dhacay degaano ka tirsan Gobolka Hiiraan
Qarax & Dagaal ka dhacay degaano ka tirsan Gobolka Hiiraan
October 16, 2020 marqaan Wararka Maanta 0
Wararka Warbaahinta ay ka heleyso degaanka Buurweyn ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda iyo Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa waxaa uu bilaawday, kaddib markii Al-Shabaab ay qarax la beegsadeen Kolonyo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan dowladda oo ka yimid dhinaca degmada Buulo-Burde, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in gaadiidka Ciidamada Dowladda lala beegsaday qarax miinada nooca dhulka lagu Aaso ah, kaddibna uu bilaawday dagaal toos ah oo laba dhinac dhex-maray, waxaana jira khasaaro dhimasho & dhaawac ah oo ka dhashay dagaalkaas.
Ciidamada la weeraray oo ka tirsan qeybta 27aad ee Millateriga Soomaaliya ayaa waxaa ay ka yimaadeen dhinaca degmada buulo-Burde, waxaana la sheegay inay ku wajahnaayeen degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, balse ay weerarka la kulmeen.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Dowladda ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalka ay Al-Shabaab khasaaro ku gaarsiiyeen, sidoo kalena ay la wareegeen degaanka Buurweyn ee Gobolka Hiiraan , isla markaana halkaasi ay howlgallo ka wadaan.
Siyaasi ku baaqay in la dhiso laba maamul oo Hirshabeele la dhaho.